Umuthi Wethenda Osebenzayo Futhi Onamandla | Chief Alexander – +2778 181 1422
You are here: Home » imithi yesizulu » Umuthi Wethenda Osebenzayo Nonamandla
Umuthi Wethenda Osebenzayo Nonamandla
Posted: 4:48 pm, March 7, 2015 by Admin
Umuthi Wethenda Osebenzayo EGoli
Baye bathi kuseGoli eligola amadoda ngoba ubaba kaSbonelo wahamba eyofuna umsebenzi akasabuyi ekhaya. Ukufunwa kwamathenda abantu kuyinto esinguchithi saka kepha iningi lisanokunganeliseki ngemiphumela. Amathenda lawa athenjiwe ukuthi iwona afaka imali yangampela ephaketheni nokho kubukeka sengathi seligaya ngomunye umhlathi manje.
Abantu sebeyahluleka ukuthola umcebo kulendima yamathenda. Inkiga iba sekutheni ayi ngoba behluleka bonke kodwa yilabo nalabo. Ngabe labo amaphumelelayo bona benza ngani? Impendulo ilula phela lapho. Kungenxa yemithi yesizulu. Umuthi wethenda kade wawuyenza imilingo futhi usazoqhubeka nokuyenza.
Ukusebenza Komuthi Wethenda
Okubalulekile ngokusebenza komuthi wethenda ukuthi usebenza masinyane. Lokho kufakazelwa imiphumela esengike ngayibona nangobufakazi ongibunikwa yilabo abake bawusebenzise lomuthi. Uma ngikakwenzela isbonelo nje kunendoda yakhona eGoli eyayifuna ithenda kulaba abakha imigwaqo kepha kwakukhona nabanye eyayincintisana nabo.
Kulapho ngempela ke eyayidinga umuthi onamandla ozoyisiza ukuthi ikwazi ukunxenxa noma ukuheha ibhodi lethenda ukuthi libone yena njengomuntu ofanelwe ukuthola lethenda. Phela uma kunomncintiswano kusuke sekuyindoda umaybonele. Kulapho ke lomnumzane weza kimi wacela umuthi wethenda osebenzayo futhi onamandla.
Umuthi Wethenda Owasiza Indoda yaseGoli
Yathi ke mayifika izofuna lomuthi ngase ngisho ukuthi uhambe nedlozi lakini mnumzane ngoba ufike lapho uzothola khona umuthi ozokusebenzela. Phela kwase kukaningi lensizwa izama ukuwina amathenda kepha iba nenkinga yemithi engasebenzi nengenayo imiphumela elindelekile. Ngase ngimnika umuthi ngamnika nemiyalelo yokuthi awusebenzise kanjani ukuze uzosebenza ngendlela okuyiyona kungabi nokuphambana kwezinkomishi.
Kwaphela amasonto amathathu ngimnikile umuthi wethenda umnumzane lo emva kwalokho ngabe sengizwa esengifonela wangitshela ukuthi yonke into ihambe njengoba ebefisa nanjengoba ehlelile. Ukujabula kwakhe kwajabulisa nami ngoba ngase ngibona ukuthi basebaningi engisazobasiza ngalomuthi onamandla. Pho wena lapho ekhaya usahlaleleni ubalisa ngosizi ibe indlela yokuphuma osizini ikhona. Uma ngabe uwumuntu wamathenda ngikhona mina ukuzokusiza.
Lomuthi uzokusiza ekutheni uthole amathuba amathenda amaningi kunalawo obukade uwathola. Uzophinde futhi ukusize ekutheni uthole ukuthandeka nokukhetheka ezindaweni eziningi. Awuzukuyizwa ingcindezi yokuncintisana uma ngabe usebenzisa umuthi wethenda osebenzayo. Baningi sebewusebenzisile lomuthi futhi abawuvali neze umlomo. Pho wena usalindeni? Sebenzisa lelifomu ukuze uzicelele owakho umuthi namuhla.
Posted in: imithi yesizulu, umuthi wethenda
Tags: imithi esebenzayo,imithi esebenzayo nenamandla,umuthi osebenzayo egoli,umuthi wesizulu,umuthi wethenda